किशोर नेपाल काठमाडौं, १२ फागुन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा ‘दुई तिहाइ’ सरकार बनेपछि उत्तरतिर कोल्टे फेरेर केरुङबाट आउने रेलको प्रतीक्षामा पल्टिरहेको सरकार अचानक घोप्टो परेर सुतेकाे छ ।
देशमा अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ५ सय मिलियन डलर बोकेर काठमाडौं छिरेको छ । यो ५ सय मिलियन डलर नेपाली मुद्रामा कति हुन्छ ? त्यतातिर सोच्न भ्याएको छैन ।
खुसीचाहिँ के कुरामा लागेको छ भने यो मुद्रा नेपालका थोत्रा सडकहरूको सुधार र बिजुली प्रसारण लाइनको निर्माणमा लगाइनेछ । अहिलेको समयमा विकासका लागि पैसा जुटाउनै गाह्रो छ । अमेरिकाले धन्न नेपालका लागि ५ सय मिलियन डलर सहयोगको कुरा सोच्न भ्याएछ ।
विगत २ वर्षदेखि समृद्धिको आस गरेर बसेका जनताका लागि यो सहयोग नै पर्याप्त छ ।
‘दुई तिहाइ’ सरकारका प्रधानमन्त्री केही दिनअघिसम्म प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी पारित हुने कुरामा ढुक्क थिए । उनले एमसीसी पारित गर्नमा ढिलाइ गरेको दोष पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको थाप्लोमा हालेका थिए । पूर्वसभामुख महराले रोशनीको मायाजालमा फसेपछि सभामुखको पद गुमाए ।
त्यसपछि सभामुख भएका अग्निप्रसाद सापकोटाले यो प्रस्तावलाई मतदानमा लगेका छैनन् । ‘एमसीसी ठीक होइन’ भनेर कराउँदै आएका भीम रावलको माग पूरा गर्न हालै नेकपाले एमसीसी छानबिन आयोग गठन गरेको छ । पार्टी मर्यादाक्रममा माधवकुमार नेपालभन्दा माथि रहेका झलनाथ खनाल उक्त आयोगका अध्यक्ष छन् र भीम रावल छन् सदस्य ।
यसमा अरू कोही सदस्य छन् भने पनि तिनको खासै महत्त्व छैन । यो आयोग भीम रावलको आत्मतुष्टिका लागि बनाइएको हो । ‘दुई तिहाइ सरकार’को ध्यान आफूतिर खिचिएकामा रावलजी आनन्दित र आह्लादित देखिन्छन् ।
नेकपाले गठन गरेको एमसीसी छानबिन आयोगका अध्यक्षमा मनोनीत झलनाथ खनाल समाजमा पढेलेखेका, भलाद्मी र वैचारिक छवि भएका नेता मानिन्छन् । भीम रावल त भीम रावल भइगए । मन्त्री हुँदा मन्त्री नै हुने र मन्त्री नहुँदा पड्किने स्वभाव भएका यी नेता जुन दिन एमसीसी भित्रियो, त्यस दिनदेखि यसको विरोधमा लागेका छन् ।
विद्यार्थी नेताका रूपमा भीम रावल प्रखर थिए । अहिले उनको त्यो प्रखर स्वभाव भुत्तिएको छ । उनले एमसीसीको विरोध बुझेर गरेका छन् कि बुझ्दै नबुझी गरेका छन् ? कसैले भन्न सक्दैन ।
उनको जिल्ला अछामका मानिसहरू ‘छाउ गोठ’ भत्काएर नारी जीवनको उच्च मूल्याङ्कन र समानताको सिर्जना गर्न लागेका छन् । उनी एमसीसीले देशको खति गर्ने प्रवचन दिइरहेका छन् ।
एमसीसी छानबिन आयोगका अध्यक्ष झलनाथ खनालले भीम रावलको भन्दा पाइला बढी उचालेर भनेका छन्, ‘एमसीसी जस्ताको तस्तै अघि बढाए नेपालको पोजिसन अमेरिकाकोभन्दा तल पर्छ ।’
धुरन्धर विद्वताले भरिएको खनालको यो वक्तव्यले सबैलाई चकाचौध पारेको छ । नेपाल अहिले अमेरिकाभन्दा कति तह माथिल्लो पोजिसनमा रहेछ ? झलनाथजीले त्यसको व्याख्या गरेका छैनन् । यद्यपि, यो कुरा बुझ्न कठिन छैन कि खनाल चिनियाँ विकास देखेर रमाएका छन् ।
चीनले सन् २०१३ देखि ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’मार्फत् विश्वव्यापी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसका लागि चीनले अनुदान दिँदैन, ऋण दिन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति अत्यन्त छोटो भ्रमणका लागि काठमाडौं आउँदा नेपाल र चीनबीच विकासका सम्झौता भएका थिए । ती निर्माणको प्रक्रियामा होलान् । यसको अर्थ चिनियाँ सहयोग लिएपछि अमेरिकी सहयोग लिनै नहुने मानसिकताको निर्माण कसरी भयो ? झलनाथजीले भनिहाले, नेपालको पोजिसन तलपर्न नदिन अब केके गर्नुपर्ने हो ? त्यो गर्नुपर्छ ।
एक जना विदेशी कूटनीतिक मित्रले भनेका थिए, ‘नेपालीहरू डकुमेण्ट पढ्दैनन् । खालि भाषणको भरमा बहकिन्छन् ।’
उनको कुरा सत्य हो । हामी नेपाली गम्भीर विषयमा गम्भीर भएर काम गर्दैनौँ । जब देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथ खनाल जस्ता व्यक्ति ‘एमसीसी जस्ताको तस्तै अघि बढाए नेपालको पोजिसन अमेरिकाको भन्दा तल पर्छ’ भन्ने हावादारी कुरा गर्छन् ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध कहिल्यै सङ्कुचित छैन । अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सधैँ सम्मान गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै कार्यकर्ता यता नारा लगाउन छाडेर उता गाडी हाँक्न थालेका छन् ।
झलनाथजीले अमेरिकासँग पैसा लिएपछि नेपालको पोजिसन तल पर्छ भनेका हुन् भने कुरा अर्कै हो । होइन भने, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रसँगको एउटा अनुदान सम्झौतालाई नेकपाभित्र घुमाइरहनु कदाचित उचित होइन ।
सत्ताको केन्द्रमा रहेकाले एमसीसी अनुदान लिएपछि नेपालीको आत्मसम्मानमा धक्का लाग्ने सोचेका छन् भने त्यो अनुदान नलिए हुन्छ । तर, ‘मोही पनि माग्ने, ढुंग्रो पनि लुकाउने’ राजनीति स्थानीय तहमा प्रभावकारी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा फ्लप हुन्छ ।
खनाल र रावलको कुरा छाडौँ । नेकपाभित्र विस्तारै एमसीसीको पक्षमा वातावरण बन्न थालेको छ । हिजो तेह्रथुमको इवामा जन्मोत्सव मनाइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको ध्यान एमसीसीमा नै थियो । उनले ५ सय मिलियन डलरको महत्त्व बुझेका छन् । ५ सय मिलियन डलर साट्दा कति बिलियन नेपाली रुपैयाँ हात पर्छ भन्ने अर्थशास्त्र उनले बुझेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, उनले बिलियनको महत्त्व बुझेका छन् । त्यो महत्त्व नबुझेका भए देशमा ३३ किलो सुन काण्ड, यती काण्ड, गोकुल काण्ड जस्ता काण्डैकाण्डको थुप्रो कसरी बन्ने थियो र ? एमसीसीको तापले विस्तारै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि तातो महसुस गर्न थालेका बुझिन्छ ।
एमसीसी अनुमोदनको कुरामा जति घिङन्याई गर्‍यो, त्यति नै बेफाइदा हुन्छ देशलाई । कामरेडहरूले संविधान संशोधन गरेर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा नछिराई एमसीसी पारित नगर्ने त होइन होला !
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १२, २०७६, ०३:००:००
कोरोनाको भरपर्दो औषधि आत्मानुशासन
कोरोना महामारीको राजनीतिक अर्थ
तोड्न नसकिएको कमिसनको जालो
पृथ्वी जयन्तीमा सेनाको हलचल
राजनीतिक नियुक्ति खाने सबैको तलब ३३% कटौती गर्न नेकपा नेताको माग